निद्रा बिथोल्ने भेरीले कुदुको चित्त कहिले बुझाउला ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more निद्रा बिथोल्ने भेरीले कुदुको चित्त कहिले बुझाउला ?
निद्रा बिथोल्ने भेरीले कुदुको चित्त कहिले बुझाउला ?
भदौ ३१ गते, २०७७ - ११:४०
सुर्खेत । घर आँगनमै मौसमअनुसारको बैँस निकाल्ने भेरी नदी एकनासले बगेको छ । कहिले गाउँभरिको निन्द्रा बिथोल्ने सुसाइ त कहिले कहिले शान्तरूपमा बग्ने भेरी नदीले कुदुवासीको तिर्खा भने अहिलेसम्म मेट्न सकेको छैन ।
प्रत्येक दिन भेरी नदीको किनारबाट धमिलो पानी ल्याएर परिवारको तिर्खा मेटाउँदै आएकी काली विक पानीको दुःख हेरेर दिक्क भइसकेको बताउँछन् । “स्वास्थ्य सेवा र सडक भएर मात्र के गर्ने रु फोहोर पानी पिउँदा हप्तामा एक पटक आफन्त बिरामी हुन्छन्, जानीजानी फोहोर पानी पिउनै पर्ने बाध्यता छ । वर्षायाम भन्दा हिउँदमा भेरी नदीको पानी सफा हुन्छ, त्यतिबेला सजिलो पनि हुन्छ”, उनी भन्छन् ।
भेरी नगरपालिकाको रु ५० लाख लगानीमा निर्माण भएको बोरिङ मेसिनबाट पानी निकाल्ने काम अहिले एक घण्टा पनि सञ्चालन हुन नसकेको सर्वसाधारण बताउँछन् । विद्युत आपूर्ति भएमा मात्र सो पानी सञ्चालनमा आउने गर्दछ । एक घण्टा मात्र आउने पानीले कुदुका सर्वसाधारणलाइ छेउ टुप्पो केही नपुग्ने उनीहरुको प्रतिक्रिया छ । झण्डै २०० घरधुरी रहेको कुदुमा उक्त पानी हातीको मुखमा जिरा भएको स्थानीयवासीहरु बताउँछन् ।
भदौ ३१ गते, २०७७ - ११:४० मा प्रकाशित